LAMMAA MAGARSAA EENYUU…??nama dhugaatii sabaaf qabsaahaa .. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLAMMAA MAGARSAA EENYUU…??nama dhugaatii sabaaf qabsaahaa ..
LAMMAA MAGARSAA EENYUU…??nama dhugaatii sabaaf qabsaahaa ..
LAMMAA MAGARSAA EENYUU…?? nama dhugaatii sabaaf qabsaahaa jira jennee qoma dhiibnee dubbachuuf haasawa mimi’aayoo waggaa guutuu haasahaa bahee qorataa ooluu irraa gabaabumatti, BAQALEE GERBA ILAALUUN deebii isaa argachuu dandeenya.
Sababbiin isaas obboo BAQALEE GERBAn waanuma lammaa magarsaan dubbatee alatti nama dubbatee miti inumaayu hanga isaayuu guutuu oromiyaa keeysa naannaye hin dubbanne.
Kanaaf sabni akka lammaa magarsaa amanee hin fudhannee, HAYYOOTA OROMOOTTU HIDHAATII dararamaa
by: Mohammednur Guye
OPDO NAN JIBBE; NANJAALLADHES AMMOO SODAADHEERAAFIS; MAALIIF?
1. NANJAALLADHE: Keessumattuu erga bulchiinsi Lammaa Magarsaafaa kun as ba’e cimina tokko tokko lakkaa’uu jalqabne. Waan Oromoon barbaaduufi ta’uu qabu yaalan. Kun ammoo Kashalabboota badii diyasfooraafi warreen haadha garaa OPDO biyya keessaa afaan qabachiise. Keessumattuu gocha jaleewwan JSM fi OPDO’ta gantoota biyya keessaa sana faana adeemaa tureen yoona uummatichi guutummaan dhumeera. Kana kan hambise jajjabaachuu sirna Bulchiinsa Lammaa Magarsaafaati. Kanarraan kan ka’es, Haqni Oromoo mumul’achuu eegale. Tarkaanfiin ta’ee hinbeeknes fudhatameera. Aktiivistoonni tokko tokkos biyya keessaa biqilaniiru. Dubbatanii yookaan barreessanii nagaan jiraataniiru. Kun jijjiirama tokkodha.
2. NANJIBBE: Utuu OPDO n bifa haaraan as hinbaane ta’ee yoona Wayyaaneef dhumateera. OPDO’n Wayyaaneetti lubbuu deebisani. Wayyaaneen ineensadha; bineensa biyya sana keessaa buqqa’uu qabdudha. Kanaaf ammoo uummatichi waan danda’u maraan ka’ee ishee dhabamsiisuuf kutatee ture. Amma garuu Wayyaaneen olaantummaadhaan mataa OPDO fi mataa saba Oromoo gubbaa jirti. Kanaaf, hayyoonni keenyaa kan akka Dr. Mararaafi Obbo Baqqalaa faa hidhaa keessatti dararamaa jiru. Harki OPDO gabaabaadha. Utuu humna waraanaa jabaa ijaarratee uummata kana humneessee mataa wayyaaneerra qubachuu danda’ee ani gamamchuunko guddaadha. Garuu danda’amaa?
3. NANSODAADHEEF: OPDO’n waan waadaa galaa jiru kanaan uummaticha keessaatti hinhojjetu taanaan, Uummatichi gaafa itti galagale Wayyaaneefi OPDO walumatti qabee awwaala jedheen sodaadha. Kanaaf ammoo haala Qeerroofi ABO’n biyyuma sana keessaatti hojjetaa jiru gahaadha. Kanaafuu….
4. KANAAFUU: OPDO’n saba Oromoo qomatti haaqabatu; ABO fi Qeerroo hinbalaaleffatiin. Shiroota ala kanaa hindhageeffatiin.Nuti tokkumakaa! Kanaratti sirna Lamama Magarsaafaa kana jaalladheera. Isaanii Qabsaa’ota abaaru hindhageenye. OPDO’nni jalqabaa kan jibbamaniif waan uummatichi garaasaa keessaatti jaallatu abaaruuf mata duree godhatanii gadi ba’uusaaniiti. Utuun OPDO’ ta’ee Alaabaa ABO ‘yyuu hinbalaaleffadhu. Maaliif? Sabichi hedduu jaallata. Garaa namaa keessaa haquun hindanda’amu!
Aanaa Limmuu Kossaatti lafti Heektaara Kuma 4 ta’u seeraan alaa qabamee jira.
Oromia Media Network’s live video: OMN: ዕለታዊ ዜና (LIVE) Sept 28, 2017